Ndeapi anonyanya kubatsira masocial network eecommerce? | ECommerce nhau
Ndeapi anonyanya kubatsira masocial network eecommerce?
Jose Ignacio | | eCommerce, Marketing, Kutengeswa kweIndaneti
Iko hakuna kupokana kuti pasocial network akanyatso kuuya kune e-commerce chikamu kuti agare. Nekuti chave chiteshi chekutaurirana chine simba che musika zvigadzirwa, masevhisi kana zvinhu. Chero angave ehunhu, angave ari emitambo kana zvigadzirwa zvinobva mukuzorora kana nguva yemahara. Iko hakuna zviripo zvisingakwanisike zvekuitwa mune yazvino dijitari midhiya mamiriro.
Nezvakanakira izvo kuti haufanire kuzvikomberedza iwe kune imwechete pasocial network. Kana zvisiri, pane kudaro, une maforamu akati wandei ane hunhu uye aunogona kushandisa sekuda kwako zvichienderana nechimiro chine yako kambani yepamhepo. Nesimba misiyano kubva pasocial network kuenda kune imwe uye kuti iwe unofanirwa kuongorora kubva zvino zvichienda kuitira kuti mashandiro aya abatsire kupfuura nhasi.
Kuti uone kuti ndedzipi netiweki zvinonyanya kukosha zve ecommerce, iwe unofanirwa kuongorora zvauri kutsvaga neiri chiitiko chehunyanzvi, nguva dzakatarwa dzawakazvimisikidza kuti uite bhizinesi iri online uyezve izvo tarisa izvo zviwanikwa yaunofanira kusarudza imwe kana akawanda masocial network mumwedzi iri kuuya. Kusvika padanho rekuona iwe kuti mhedzisiro inogutsa zvakanyanya kupfuura iwe zvawaifunga kubva pakutanga.
1 Anonyanya kubatsira masocial network: Linkedin
2 Youtube nesimba remufananidzo
3 Facebook: vazhinji vashandisi vanozvitsigira
4 Twiter imwe zvekare pakati pevashandisi
5 Pinterest: ine tsananguro dzinoshanda
6 Google + mune yayo yakajairika vhezheni
Anonyanya kubatsira masocial network: Linkedin
Ehezve, ese masocial network ane simba kwazvo kuzadzisa rako bhizinesi zvinangwa. Asi zvakati wandei mune izvi kuti hausi network wevanhu vamwe, asi nekusiyana iyo inyanzvi network uye ndiyo nzira iyo inonzwisiswa nevazhinji vashandisi kutenderera pasirese. Nekuti zvirokwazvo, kana Linkedin inogona kuverengerwa nechimwe chinhu, imhaka yekukosha kwayo kwe zvine chekuita nemamwe makambani uye zvechokwadi vashandisi kana vatengi.
Kubva pairi, hauzove nesarudzo kunze kwekutora chikamu zvakanyanya uye kukwezva huwandu hukuru hwevashandisi kuitira kuti vakwanise kutora iwo meseji iwe waunoda kuendesa kwavari kubva zvino zvichienda mberi. Mupfungwa iyi, haugone kukanganwa kuti pasocial network iyi inobatsira chaizvo kuvhara zvibvumirano zvebhizimusi zvinogona kubatsira zvaunofarira. Izvo zvakakosha zvikuru kuti udzidze kubva mukubudirira uye kutadza kwezviitiko zvemakambani aya.
Nepo kune rimwe divi, iwe haugone kuregeredza zvine hungwaru mafambiro ako pasocial network chero. Semuenzaniso, kana iwe uchida kushambadza iyo nzira yemubatanidzwa, kukuvadza chinhu chega chinhu chega. Sezvo chiri chishandiso chine simba, kwete chete kusangana nevanhu vanogona kufarira, asiwo kuzvikwata zvebhizinesi. Chimwe chinhu icho chausingakwanise kuita kubva kune mamwe mashoma masocial network.
Youtube nesimba remufananidzo
Iyi ndiyo imwe yemasocial network iwe aunogona kutora mukana parizvino nekuda kwehunhu hwakakosha hwaunopihwa izvi rutsigiro mukutaurirana wega uye bhizinesi. Mupfungwa iyi, hapana chinhu chiri nani pane kushandisa iyo yekare aphorism iyo inoti "mufananidzo wakakosha chiuru chemazwi". Zvakanaka, inguva yekuzviisa mukudzidzira kusimudzira chako chehunyanzvi chiitiko nekuzvipira kwakakosha.
Iwe haugone kukanganwa kuti pachinhu ichi chinofunga rutsigiro mukutaurirana kwekuteerera izvo zvinogona kuve nerutsigiro rukuru kubata kwako chitoro kana zvemagetsi zvekutengeserana. Kubva pane yakasarudzika nzira kubva kune mamwe mashoma akaomarara masocial network kutumira meseji iwe yaunoda kupa kune ako vatengi uye vashandisi. Iyo svikiro rine simba kwazvo iro rinowanzo shandiswa pamwe neakawanda maitikiro echiratidzo kana echishambadziro, kunyangwe iinewo chimwe chinobatsira sekusimbisa kutaurirana kwekambani nekambani. Kunyanya mumakambani ese edhijitari senge ako.
Facebook: vazhinji vashandisi vanozvitsigira
Icho chimwe cheakanyanya masocial network par kugona uye anogona kushandira zvaunofarira pasina kunyanyisa kunetseka mumafomati. Iyo sarudzo yakajeka kwazvo zvekuti ine zvakare kune yakawanda yekubatanidza kumatunhu ese, asi imwe yeayo ane mhedzisiro yakawanda ndeyevaraidzo. Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti zvinosanganisira inoti, mifananidzo, zviitiko… Asi pamusoro pezvose, zvinongedzo zvinosanganisirwa mune zvese izvi zviwanikwa zvataurwa.
Iyo nzira yakapusa yekutora kutarisisa kwevatengi vako vese uye vashandisi kubva pane yakapusa kushandisa nzira kubva ikozvino. Iko pasina kupokana kuti inoumba chikuva chekutaurirana chisingakwanise kufuratirwa, asi chinofanirwa kutsanangurwa nesumo kumusika pamusoro uye pamusoro pezvikamu zvehukasha zvakanyanya kubva kune yekutengesa maonero.
Twiter imwe zvekare pakati pevashandisi
Iine hunhu hwakafanana neiyo yapfuura, mune ino chishandiso chakakwana chekutaurirana kupfupisa izvo zvakakosha nezve chaicho chigadzirwa kana sevhisi. Kusvika pamwero iyo inoshandiswa nehukuru hwakawanda ku kusimudzira mufananidzo wechiratidzo nemari yakakura inochengeterwa nekambani. Inonyanya kubatsira mune mamwe madhijitari, akadai sekutaurirana, maresitorendi uye matekinoroji matsva mukuzorora uye varaidzo.
Iyo yakafanana chaizvo neiyo yapfuura, kunyangwe mune ino chaiyo kesi ine kudzikiswa kwemitengo yekambani yepamhepo inonyanya kukosha. Kusvika padanho rekuti rinogona kushanda sosi sosi yekuchengetedza mune zvako zvemari zvirevo kubva pakutanga kwako kwehunyanzvi chiitiko. Nemitsara yekuita inotsanangurwa kwazvo uye inozivikanwa nechikamu chikuru chevagari vepasi.
Pinterest: ine tsananguro dzinoshanda
Ehezve, ndeimwe yemafomati ekuvandudza mukati mesocial network mumakore achangopfuura kana isu taigona kutaura nezvemwedzi. Nekuti ipuratifomu yedhijitari inozivikanwa nemutauro wayo wakanangana uye wepamberi uye nekudaro ine simba rakakura kune vashandisi. Kune rimwe divi, tsananguro inofanirwa kuitwa kubva pasocial network iyi inofanira kuva ipfupi pane mamwe ese, iine data rinenge rakanyatsojeka kupfuura nakare kose. Iko kuti, inokodzera kwazvo zvikamu zvemadhijitari, senge izvo zvinotorwa kubva muzvikamu zvakanyanya zvevatengesi venzvimbo yebhizinesi.
Kune rimwe divi, iro rinoonekwa basa richava rimwe remasangano aro akajairika, seruzivo rwekuwedzera rwevatengi varipo mune ino inotevera-chizvarwa social network. Inopawo chinhu chinoshamisa kwazvo kuti iwe ugone kuratidza makatalog ezvigadzirwa zvinotengeswa kubva kune vanobatana kuenda kunetiweki. Nepo kune rimwe divi, mupiro waro wekuvandudza kushambadzira mameseji pamwe nekukosha kwemapato ari chikamu chezvekutengesa kunozivikanwa.
Google + mune yayo yakajairika vhezheni﻿
Kana isu hatikwanise kukanganwa ino yepamhepo chikuva iyo inogona kushanda zvakanyanya kubva zvino zvichienda mberi kusimudzira kutengeswa kwezvigadzirwa zvedu, masevhisi kana zvinyorwa. Mune ino kesi, nekuti inotipa mukana wekugovana zvakasiyana zvinhu, kubva kumagadziriso ane zvinongedzo kune mapeji, kana zvimwe zvikamu, senge mifananidzo, mavhidhiyo, nezvimwe. Izvi zvinoreva kuti, inokodzera kwazvo kuita zviito zvakanangana nekusimudzira bhizinesi redu redhijitari pamusoro pezvimwe zvakateedzana zvehunyanzvi zvesaiti pasocial network.
Kune rimwe divi, iyi foramu pakati pevanhu inozivikanwa nekushomeka kwayo kuti isvike kune hombe vashandisi. Iko kwaunogona kuratidza yeruzhinji chimiro chekambani yedu kuyedza vamwe vanhu kuzviziva uye kuziva zvatinoita. Muchidimbu, dhijitari yekutaurirana chikuva iyo, kana ichienderana neprofile yedu, inogona kuve inoshanda kwazvo kuzadzisa zvinangwa zvedu nekukurumidza muchirongwa chedu chehunyanzvi.
Kubva pane iyi nzira, zvinokurudzirwa kwazvo kuti iwe uzive ayo akakosha mashandiro uye kuti iwe unogona kutora mukana uzere kubva iwo kubva zvino zvichienda kubva kune yehunyanzvi maonero ekuona. Nekuti zvirizvo, pane mukana chaiwo wekugovana nhau pakati pevashandisi kuitira kuti nenzira iyi iwe uri muchinzvimbo chekusimudzira bhizinesi rako kuburikidza neiyi yakasarudzika social network. Kufanana neruzivo rwese urwo iwe rwaunoda kupa kuruzhinji runokufarira iwe zvakanyanya uye kuti kune imwe nhanho inogona zvakanyanya kana kushomeka mamiriro ako ekuonekwa mune rako bhizinesi.
Iyo yakafanana chaizvo neiyo yapfuura, kunyangwe mune ino chaiyo kesi ine kudzikiswa kwemitengo yekambani yepamhepo inonyanya kukosha. Kusvika padanho rekuti rinogona kushanda sosi sosi yekuchengetedza mune zvako zvemari zvirevo kubva pakutanga kwako kwehunyanzvi chiitiko. Nemitsara yekuita inotsanangurwa kwazvo uye inozivikanwa nechikamu chikuru chevagari vepasi. . Nesimba misiyano kubva pasocial network kuenda kune imwe uye kuti iwe unofanirwa kuongorora kubva zvino zvichienda mberi kuitira kuti mashandiro aya abatsire kupfuura nhasi.
Iwo mamwe emapuratifomu ayo anogona kukubatsira iwe kusimudzira rako redhijitari bhizinesi uye chengetedza kusangana nevatengi kana vashandisi kubva pane yakapusa maitiro kune wese munhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Ndeapi anonyanya kubatsira masocial network eecommerce?
Nzira dzekubhadhara mukutengesa zvemagetsi